California Kurota chikadzi | MyWeedSeeds.com
California Kurota feminized
Nguva yekukohwa: Gumiguru
Mhedzisiro: yakasimba kwazvo kusimudzira kumusoro
VeCalifornia vanorota vakadzi vembanje mbanje svutugadzike yakabva kuCalifornia [USA]. Iyi inoshamisa mbeu yechikadzi mbanje dzakasiyana-siyana yakatsemuka pakati pemhando mbiri dzakagadzikana chena dzembanje mbanje. Nekuda kwevachena vachena mbanje vabereki, California vanorota mbanje iri padhuze neiyo inozivikanwa 'White chirikadzi' mbanje dzakasiyana uye vakagara nhaka yavo hukuru hunhu hwekuve vane simba uye vachigadzira akakurisa akakurisa emuchu. ICalifornia inorota mukadzi wechikadzi mbanje chirimwa chinokura kusvika pakati nepakati necola hombe hombe [yepamusoro budha] iro rakazara neTC makristasi uye resin gland. Ichi chirimwa chemukadzi checannabis chakakora zvikuru nematavi mashoma emumativi akafukidzwa nemaruva akakombana echikadzi embanje maruva [mabukira] futi. California zviroto zvinoda kutarisirwa kushoma kuti usvike pakukura. Iyi inoyevedza yakakwirira inogona kurimwa mukati meimba nekunze, uye inokodzera kukura mugreenhouse. Iyi ndiyo sarudzo yakanakira murimi wekutengesa mbanje pamwe neanogadzira.
ICalifornia inorota hadzi mbanje chirimwa chinokura chakasimba kwazvo, chinonhuwira chinotapira nekumonyoroka kwemapine manyoro. Iko kuravira kweCalifornia kurota 'yakaomeswa mbanje buds inotapira kwazvo neine zvishoma muchero mutsva unonaka. Hutsi hwakasimba asi husina kunyanya kupinza. Iyo yepamusoro yakasimba asi inotandadza kwazvo zvese mupfungwa nemumuviri, pasina unonetesa kunzwa.
Strawberry Ice chikadzi